Vokatry ny tandrevaky ny mpitsabo : maty ilay vehivavy nodidina «appendicite» | NewsMada
Vokatry ny tandrevaky ny mpitsabo : maty ilay vehivavy nodidina «appendicite»
Nahitana tranga namoizana ain’olona indray teny amin’ny hopitaly Bejofo Mahitsy ny asabotsy lasa teo. Vehivavy 29 taona avy any Taolagnaro fa manam-bady eto Antananarivo no voakasika. Niditra hopitaly teny izy fa hodidiana « appendicite » taorian’ny échographie natao azy. Roa andro taorian’ny fandidiana, nibontsina ny kibon’ilay vehivavy ary nilaza ny mpitsabo fa haverina indray ny fandidiana fa misy olana. Niroso tamin’ny fandidiana faharoa ny mpitsabo malagasy nefa tsy nihatsara ny fahasalaman’ny marary. Nanomboka teo, tsy nahatsiaro tena intsony ny marary ary mbola nanamafy ny dokotera fa tsy maintsy atao ny fandidiana fahatelo.
Nilaza ny fianakaviana fa haka mpitsabo hafa mihitsy hanao ny fandidiana ary nanaiky ny tomponandraikitra. Rehefa tonga ny mpitsabo avy aty ivelany, nandà indray ny dokotera tao amin’ny hopitaly fa tsy mahazo mikasika ny marary ny tenany. Namoy ny ainy ilay vehivavy nandritra izany. Tezitra mafy noho izany ny fianakavian’ny maty satria fandidiana « appendicite » no nidirana hopitaly nefa fahafatesana no niafarany.
Efa nahalany vola be ny fianakaviana tamin’ny fandidiana indroa miantoana ary mbola nitaky vola ilay mpandidy ho an’ny fandidiana fahatelo saika hatao. Nisy kitapon-dra telo koa novidin’ny fianakaviana , tsy hita izay nanjavonany nefa ny fandidiana fahatelo tsy tontosa akory, hoy ny fanazavana azo. Ilay dokotera rahateo tsy hita intsony teny amin’ny hopitaly rehefa namoy ny ainy ilay marary nodidiny.
Tranga faharoa namoizana ain’olona telo tao anatin’ny andro vitsivitsy izao niseho teto Antananarivo sy Mahitsy izao. Manontany ny rehetra hoe vokatry ny tandrevaka ve sa tsy fahafehezana ny asa mihitsy fa mampitondra faisana ny fianakaviana manana marary. Aiza ny fandraisana andraikitry ny minisitera mpiahy.
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny minisitera
Manoloana ny tranga nahafatesana renim-pianakaviana iray sy ny zanany tao am-bohoka ny herinandro lasa teo, teny amin’ny hopitalim-panjakana lehibe iray, nilaza ny sekretera jeneralin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka, Ratsirarson Joséa fa manao ny fanadihadiana lalina amin’ny andraikitry ny tsirairay voakasiky ny raharaha ny tomponandraikitra amin’izao fotoana izao. Handray ny andraikitra feno ny minisitera rehefa mivaly ny fanadihadiana satria saropady ny ain’olombelona. Ny fianakavian’ny maty rahateo efa nilaza fa hitory ny mpitsabo sy ny tomponandraikitra rehetra nandritra ny fotoana nisehoan’ny voina.